LAYAAB! 30-ilbiriqsi gudohood kubaro wajiyada kala duwan ee xidigada Kangana Ranaut–DAAWO
February 22, 2017 No Comments News, Somali 509 views
Xidigada aadka looga tageero bollywoodka ee Kangana Ranaut ayaa waqtiyadii ugu danbeeyey waxaa lagu xamanayey qof rabshad iyo dhibaato abuur badan markii la arkay waxa kadhex taagan ayada iyo jilaaga weyn ee Hrithik Roshan.
Xidigadan ayaa ku caan baxday katurjimada dareenkeeda dhabta ah iyo waliba soo bandhigida waxa niyadeeda kujira waxaana sida inta badan aad lasocotan marka wax laga weydiiyo dadka uu xiifaltanku kala dhaxeeyo iyo sidoo kale kuwa kusoo xadgudbababa waxay jawaab ama faalo uga bixisa qaab ay xita saxaafadu layaabto ayadoo aan waxba ula harin shakhsiga ay markas kahadlayso waxaana la oran karaa waa wax ay dheertahay dhamaan jilayaasha ayada lamidka ah maadama oo ay qalbigeeda kahadasho.
Waxaan hoos idinku haynaa muuqaal muujinaya waraysi ay layeelatay mid kamid ah wargeysyada India oo lagu magacaabo BollywoodLife waxayna sida aad arki in ka yar 30 ilbiriqsi guduhood ku badbadalysaa wajigeeda iyo niyadeda ayaado marba waxa markaas laweydiiyo siinaysa qiimayntooda,dareenkooda iyo wajigooda.
RASMI: Amir Khan Iyo Rajinikanth oo dhawaan dagaal culus uu kudhex mari doono Box Officeka
Liiska xidigaha ku guuleystey abaal marinta muusiga ugu wanagsan ee “Mircha Music Awards”
WOW! Daawo sida loo sameeyey muuqalada ugu waaweyn ee filimka “The Ghazi Attack”